गणतन्त्रका यी ‘पारस’ प्रवृत्ति | Ratopati
प्रस्ट छ, गणतन्त्र जनताका लागि नै ल्याइएको थियो, जनताका अधिकारका लागि ल्याइएको थियो । जनताको आत्मसम्मानका लागि गणतन्त्र रोजिएको हो । नागरिकमा कुनै प्रकारको विभेद गरिनेछैन भन्ने प्रतिबद्धताका साथ राजनीतिक नेतृत्वले जनतामा गणतन्त्रको सपना देखाएको थियो । जनताको रगत पसिनालाई पारस प्रवृत्तिले पानी बराबर पनि नठानेको भन्दै त्यस्ता प्रवृत्तिको विरोधमा गणतन्त्र रोजिएको थियो । गणतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा हुन्छन् भनिएको थियो । फेरि आज त्यही गणतन्त्रमा किन जनताको जीवनसँग यसरी खेलवाड हुन्छ ? सडकमा हिँडिरहेका आम नागरिकको जीवनलाई मूल्यहीन ठानेर हुइँकिने प्रवृत्ति राजतन्त्रमाजस्तै गणतन्त्रमा पनि कायमै रहने हो भने कसरी दुई शासन व्यवस्थामा जनताले फरक अनुभूति गर्ने ? प्रश्न उठ्न थालेको छ ।